नेपालको पर्वतारोहण व्यवसाय : सम्भावना र चुनौतीहरु
पर्यटकहरुका लागि आकर्षण गर्ने नेपालमा धेरै विषयहरु छन् । यहाँको हरियाली वातावरण र वन जंगलले त धेरैलाई लोभ्याउँछ । त्यति मात्र होइन, धार्मिक मठ–मन्दिरहरु र नदीनालाहरुले पनि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । -याफ्टिङ, बञ्जिजम्प, प्याराग्लाइडिङजस्ता सम्भावित विषयहरुले पनि पर्यटक तान्न सक्छन् । यसका अतिरिक्त नेपालमा पर्यटकहरुका लागि पर्वतारोहण पनि एक प्रमुख विषय हुने गरेको पाइएको छ । विश्वका धेरै देशका नागरिकहरु नेपालमा पर्वतारोहणकै लागि मात्र भए पनि आउने गरेका छन् । यहाँ रहेका सयौं पर्वत, पहाड र विशेषगरी हिमालहरुले नै उनीहरुको लक्ष्य पनि पूरा गर्दै आएको कुरामा शंका छैन ।अन्य विषय जस्तै धेरै नै सम्भावना भए पनि नेपालमा पर्वतारोहण व्यवसाय भने निकै पछिदेखि मात्र सुरु भएको हो । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये १५ प्रतिशत भू–भाग हिमाली भेगअन्तर्गत पर्छ । यस भेगमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा त पर्छ नै यसका अतिरिक्त विश्वकै अग्ला १० हिमालमध्ये सात वटा नेपालमै छन् । ८८४८ मिटर मापन भएको विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथाले गर्दा नै नेपालमा पर्वतारोहण व्यवसायले गति लिएको कुरामा भने शंका छैन । सगरमाथाकै कुरा गर्ने हो भने सन् १९५३ मे २९ मा नेपाली नागरिक तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्यूजल्याण्डका नागरिक सरएडमण्ड हिलारीले पहिलो पटक यसको सफल आरोहण गरेका थिए । पटक–पटकको लामो प्रयासपछि मात्र उनीहरुले यो सफलता पाएका हुन् । यो त्यति सजिलो काम भने थिएन । सफलतासँगै उनीहरुको चर्चा पनि सगरमाथाभन्दा उच्च भएको थियो ।
नेपाली महिलातर्फ वि.सं. ०५० वैशाख १० गते पासाङ ल्याहामो शेर्पाले पहिलो पटक सगरमाथाको शिखर चुमेकी भए पनि फर्कने क्रममा उनको दुःखद निधन भएको थियो । पहिलो महिला सगरमाथा आरोही भने जापानकी जुनको ताइवे हुन् । नेपाली नागरिकमध्ये जतिले सगरमाथा आरोहण गरे ती धेरै जसो शेर्पा जाति नै छन् । यसर्थ उनीहरु हिमाल चढ्नमा निकै सिपालु हुन्छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सकिन्छ । त्यस यता विगत दुई वर्ष अघिसम्म चार हजार आठ सय २८ जना पर्वतारोहीहरुले सगरमाथामा आफ्नो पाइला राखिसकेका छन् । हुन त यो संख्यामा एक पटकभन्दा धेरै आरोहण गर्नेहरुको संख्या दोहोरिएको पनि छ । तैपनि तथ्यांकले भने कुल संख्या चार हजार आठ सय २८ नै देखाएको छ । सगरमाथालाई नेपाली नामकरण गर्ने व्यक्ति इतिहासकार बाबुराम आचार्य हुन् । वि.सं. १९९५ मा उनले राखेको यो नेपाली नाम नै अहिले विश्वमा प्रख्यात छ । जुन नेपाल र नेपालीका लागि निकै गर्वको विषय पनि हो । सोलुखुम्बु जिल्लाको साविकको खुम्जुङ गाविसमा पर्ने सगरमाथा आरोहण गर्नका लागि सरकारलाई निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ । जसमा नेपाली नागरिकका लागि ७५ हजार रुपैयाँ र विदेशीहरुका लागि प्रतिव्यक्ति ११ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । यो एक पटकका लागि लाग्ने शुल्क हो । स्वदेशीभन्दा पनि विदेशीहरुले सगरमाथा चढ्नका लागि खर्च गर्ने ठूलो रुपैयाँ नै नेपालको आम्दानी हो । सगरमाथा चढ्न निकै खर्चिलो भए पनि यसमा आरोहण गर्न चाहनेहरुको संख्यामा भने कमी आएको छैन । २०१६ मा मात्रै २९ देशका दुई सय ८० जनाले सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिएका थिए । यो संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । चार वर्ष अगाडि सन् २०१४ अप्रिल ५ मा यही शिखर आरोहणकै क्रममा हिमपहिरोमा परी १६ जना आरोहीहरुको दुःखद निधन भएपछि त्यस लगत्तै दुई वर्ष सरकारले सगरमाथा आरोहण बन्द गरेको थियो ।
वर्ष २०१६ देखि सरकारले आरोहण खुला गरेको छ । मे महिनाको १५ तारिखदेखि सगरमाथा आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ । विगत आठ वर्ष अघिदेखि सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिनेहरुको संख्या यस्तो छ । सन् २०१० मा २३७ जनाले अनुमति लिएका थिए । सन् २०११ मा २५१ जनाले अनुमति लिए । त्यस्तै २०१२ मा ३४१ जना, २०१३ मा ३४८ जना र सन् २०१४ मा ३२६ जनाले यसको आरोहण अनुमति लिए । त्यस्तै सन् २०१५ मा ३५७ (यस वर्ष अनुमति लिए पनि कुनै पनि व्यक्तिले आरोहण गर्न भने पाएनन् ) र २०१६ मा २८० जनाले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका थिए । सन् २०१७ मा ३७५ जनाले अनुमति लिए भने यसवर्ष छ सय ९८ जनाले आरोहणका लागि अनुमति पाएका छन् । सगरमाथाका अतिरिक्त अन्य हिमशृङ्खलाहरुको पनि आरोहण अनुमति लिनेहरु छन् । वर्ष ०१६ मा ल्होत्सेका लागि नौ जना, माउण्ट मकालुका लागि पाँच जना, नुत्सेका लागि पाँच, धौलागिरि, मनास्लु र आमादब्लम हिमालका लागि ३/३ जनाले अनुमति लिएका थिए । योसँगै सगरमाथासहित १८ वटा हिमालमा ७६ दलले गत वर्ष आरोहण अनुमति लिए । यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि छ सय ९८ जनाले आरोहण अनुमति लिएका थिए ।
पर्यटन विभागका अनुसार सगरमाथासहित विभिन्न २८ वटा हिमाल आरोहणका लागि छ सय ९८ जनाले आरोहण अनुमति लिएका हुन् । यीमध्ये सगरमाथा आरोहणका लागि चार नेपालीसहित ३८ वटा टिमका तीन सय ६४ पर्वतारोहीले आरोहण अनुमति लिएका थिए । यस वर्षको सगरमाथा आरोहणबाट ३६ करोड १४ लाख ९८ हजार तीन सय २१ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । आरोहण वैशाख ३० गतेदेखि सुरु भएर जेठ ११ गतेसम्म चलेको हो । अघिल्ला वर्षभन्दा यस पटकको आरोहणमा मानवीय क्षति कम भएको छ । यस वर्ष पर्यटन विभागले आरोहण अनुमति दिएका २८ हिमालबाट ४१ करोड २८ लाख ८४ हजार छ सय ३८ रकम रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै रोयल्टी सगरमाथाले सङ्कलन गरेको छ । यो तथ्यांकमा केही बढ्न सक्ने पर्यटन विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार सगरमाथाबाट ३६ करोड १४ लाख ९८ हजार तीन सय १२ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । सगरमाथासँगै ल्होत्से हिमालबाट एक करोड ९८ लाख ९३ हजार ६० रोयल्टी सङ्कलन भयो । यसैगरी कञ्चनजंघाबाट ८२ लाख २६ हजार ७२०, धौलागिरिबाट ६३ लाख ६३ हजार ९०, आमाडब्लामबाट २० लाख ४७ हजार ८७७ र मनास्लुबाट १४ लाख ९३ हजार २८० रकम सङ्कलन भएको छ । यस वर्ष चार नेपालीसहित ३८ आरोहीदलबाट सगरमाथा आरोहणका लागि आरोहीहरु गएका थिए । अघिल्लो वर्ष सन् २०१७ को यही सिजनमा एक सय आठ टिमका आठ सय ३८ आरोहीले हिमाल आरोहण अनुमति लिएका थिए । यसमध्ये ४३ वटा टिमका तीन सय ७५ आरोही सगरमाथा आरोहणमा गएका थिए ।
सगरमाथापछि सबैभन्दा बढी ल्होत्से हिमाल आरोहणका लागि नौ टिमका ९६ जनाले अनुमति लिएका थिए । यस्तै कञ्चनजंघा हिमाल आरोहण गर्न पाँच टिमका ४४ जना, अमादब्लम हिमालका लागि चार टिमका २८ जना, धवलागिरि हिमालका लागि तीन टिमका ३४ जना र मकालु हिमालका लागि तीन टिमका २७ जनाले आरोहणको तयारी गरेका थिए । जसमध्ये छ जना आरोहीहरुको दुःखद निधन भएको थियो । गत वर्षदेखि जीपिएस ट्रयाकिङ सिस्टमबाट हिमाल आरोहणको दृश्य कैद गर्ने भनिए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेको भन्दै विभागले यस प्रविधि अझै सुरू गरेको छैन । विभागका अनुसार गत वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि हालसम्मकै बढी (नेपाली मोहडाबाट) ४१ वटा आरोहण दलका तीन सय ७५ जनाले सगरमाथाका लागि अनुमति लिएका थिए । सगरमाथा आरोहणका लागि विदेशीले प्रतिव्यक्ति ११ हजार अमेरिकी डलर रोयल्टी तिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नेपाली नागरिकको हकमा प्रतिव्यक्ति ७५ हजार रुपियाँ रोयल्टी तिर्नु पर्नेछ । गतवर्ष रोयल्टीबापत नै ११ करोडभन्दा धेरै रकम सङ्कलन भएको थियो । सगरमाथा आरोहणका लागि बढीमा १५ जनाको समूह बनाउन पाउने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले आरोहीको अनुगमन गर्न चार दर्जनभन्दा बढी अधिकारी खटाउने गरेको छ । जसका लागि मन्त्रालय र विभागबाट नासुदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई सात दिनको तालिम दिएर खटाउने गरेको छ ।
पर्वतारोहण नियमावलीअनुसार छ हजार पाँच सयभन्दा बढीको उचाइ भएको हिमाल आरोहणमा सरकारले सम्पर्क अधिकृत खटाउने व्यवस्था छ । तीन हजार पाँच सय मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरुमा हिउँ पर्ने र तिनीहरुको आरोहण गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसपटक हिमाल आरोहणका लागि क्यानडा, इटाली, पोल्यान्ड, चीन, भारत, जर्मनी, बेलायत, अस्टेलिया, अमेरिका र स्पेनलगायतका मुलुकका नागरिकले अनुमति लिएका छन् । पछिल्ला केही वर्ष यता सगरमाथालगायतका विभिन्न हिमाल आरोहण गर्नेहरुले नयाँ–नयाँ विषयमा किर्तीमान राख्दै रेकर्ड कायम गर्ने गरेका छन् । यसवर्ष एउटा भारतीय टोलीले अक्सिजन नलगाइकन सगरमाथा चढ्छु भनेर निवेदन आएको थियो । गतवर्ष यस्तै रेकर्ड राख्ने क्रममा नेपालका पाका आरोही मीनबहादुर शेरचनले सबैभन्दा बढी उमेरमा सगरमाथा चढ्ने कीर्तिमानका लागि स्वीकृति लिएका थिए । तर उनको आरोहणकै क्रममा निधन भयो । यसवर्ष कामिरिता शेर्पाले २२ औं पटक आरोहणको कीर्तिमान राखे भने पाँच जना महिला पत्रकारहरुले पनि सगरमाथा आरोहण गरे । विश्वको उत्कृष्ट गन्तव्यमा पर्ने सगरमाथा आरोहण शुल्क नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । यसले स्थानीयस्तरको आर्थिक प्रगति हुने गरेको छ ।
त्यस्तै धेरै युवायुवतीले रोजगारी पनि पाइरहेका छन् । राज्यको केन्द्रीय आम्दानीमा पनि यसले महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ । यसवर्ष नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्वतारोहण संघले विश्वप्रसिद्ध हिमाल आरोहीको सम्मान कार्यक्रम गर्दै उनीहरुले सगरमाथा आरोहण गरेको ४० औं वर्ष मनाएको छ । सगरमाथा नेपालको पहिचान र गौरवसँग जोडिएको छ । सगरमाथाकै कारण विश्वमा नेपाल चिनिएको र अधिकांश विदेशी पर्यटकहरु हिमाल अनि सगरमाथाकै अवलोकन र आरोहणका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । गत वैशाख ६ गते सरकारले एउटा विदेशी टिमले सगरमाथा आरोहण गरेको ४० वर्ष पूरा भएको अवसरमा आठ विश्वप्रसिद्ध हिमाल आरोहीलाई संयुक्तरुपमा सम्मान गरेको थियो । सो अवसरमा सम्मानित भएका हिमाल आरोहीलाई शुभकामना दिँदै हिमाल आरोहण गर्न चाहनेका लागि नेपाल आउँन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले आग्रह गरेका थिए । यसवर्ष सम्मानित आरोहीहरुले सन् १९७८ मा सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण गरेका थिए । नेपाल पर्वतारोहण संघका अनुसार त्यो समूहमा १२ आरोही सहभागी थिए । तीमध्ये चार आरोहीको मृत्यु भइसकेको छ । यसवर्ष सम्मानित हुनेमा अस्ट्रियन उल्फग्याङ न्याज, प्रा.डा. पिटर हाबलर, प्रा.डा. रेमन्ड मार्गे्रटर, रोबर्ट सावर, हान्स सेल, हेलमुथ ह्यागनर, इटालियन राइनहोल्ड म्यासनर, स्विस प्रा.डा. अजोल्ड ओरेलजेड रहेका छन् । उल्लिखित हिमाल आरोहीहरुले सगरमाथा, आमादब्लम, चोयु, धौलागिरिलगायतका हिमाल आरोहण गरिसकेका छन् । सम्मानित विदेशी आरोहीमार्फत नेपालमा रहेका हिमालको प्रचार–प्रसार हुने नेपाल पर्यटन बोर्डको विश्वास छ । संघ र बोर्डको संयुक्त प्रयासले विश्वप्रसिद्ध आठ आरोहीलाई सम्मान गर्न पाउँदा नेपालले गर्व महसुस गरेको छ ।
नेपालको हिमाललाई विश्वप्रसिद्ध बनाउन आरोहीहरुको अहम भूमिका छ । हरेक सिजनमा विदेशी आरोही सगरमाथा आरोहण गर्न आउने गरेका छन् । आरोहीका लागि सगरमाथा आरोहण एक उद्देश्य भए पनि नेपालको लागि विश्व कीर्तिमान हो । यो त भयो सगरमाथा र अन्य हिमालको आरोहणका बारेमा केही जानकारी । यसका साथै नेपालका अन्य पर्वत र पहाडहरुको अवलोकन र आरोहण गर्न पनि विदेशीहरु आउने गरेका छन् । अन्नपूर्ण पदयात्रा, लाङटाङ, महाभारत तथा चुरेपहाडहरुको अवलोकन र अध्ययन गर्नका लागि आउने विदेशीहरुको संख्यामा पनि कमी आएको छैन । कतिपय ठाउँमा कृतिम रुपमा पनि पहाड जस्तो बनाएर त्यसमाथि रक क्लाइम्बिङ गर्ने र गराउने पनि गरिएको छ । प्राकृतिक रुपमा हिलक्लाइम्बिङ सम्भव नहुने ठाउँमा यस्तो तरिकाको कृतिम पहाड चढ्ने कार्यले पनि कतिपय विदेशीहरुलाई तान्ने गरेको छ । यसरी धेरै ठूलो अभिलाषा बोकेर नेपाल आउने गरेका विदेशी पर्यटकहरुलाई हामीहरुले भने सोचेजस्तो वातावरण दिन सकेका छैनौं । हामीले उनीहरुलाई सुरुक्षाको अनुभूति पनि पर्याप्त मात्रामा दिन नसक्दा कतिपय पर्यटकहरु लुटिएका पनि छन् । पर्यटक लक्षित पर्वतारोहणको तालिम र दक्ष जानकारहरु पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । उनीहरुका लागि यातायातको पनि उचित तरिकाले सुविधा दिन नसक्दा धेरै ठूलो जोखिम मोलेरै पैदल यात्रा गर्नेहरुको संख्या पनि धेरै छ ।
आरोहणका दौरानमा आउन सक्ने भैपरी समस्याहरु, दुर्घटना र यसबाट चोटपटक वा बिरामी भएमा उपचारका लागि स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं । यी मात्र होइन, मुख्य समस्या त हिमाल वा अन्य शिखरहरु आरोहण गर्दा आरोहीहरुले गर्ने गरेको फोहोरको पनि हामीले उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु अहिले निकै ठूलो चुनौती पनि भएको छ । यी र यस्ता थुप्रै समस्याहरु भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म पर्वतारोहणमा जति प्रगति भएको छ, त्यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनहरुमा नेपालका अन्य सम्भाव्यताहरुलाई खोतल्दै विदेशी पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सरकार र यस माताहतका अन्य निकायहरु पनि सक्रियताका साथ लागी पर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसो गर्न सकिए मात्र नेपालको पर्वतारोहण व्यवसायले अहिलेभन्दा निकै ठूलो प्रगति गर्न सक्छ । आगामी दिनमा यो देश विकासको एउटा मेरुदण्ड पनि बन्न सक्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)